Akụkọ Bible: Josef Elee Ụmụnne Ya Ule - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
JOSEF chọrọ ịma ma ụmụnne ya iri ndị tọrọ ya hà ka bụ ndị obi tara mmiri na ndị obi ọjọọ. N’ihi ya, ọ sịrị ha: ‘Unu bụ ndị nledo. Unu bịara ịchọpụta ebe obodo anyị na-adịghị ike.’
Ha sịrị: ‘Ee e, anyị abụghị ndị nledo. Anyị bụ ndị ezigbo mmadụ. Anyị niile bụ ụmụnne. Anyị dị iri na abụọ. Ma otu nwanne anyị anọkwaghị, nke kasị nta na nna anyị nọ n’ụlọ.’
Josef mere ka à ga-asị na o kweghị ihe ha kwuru. O debere nwanne ya bụ́ Simiọn n’ụlọ mkpọrọ wee kwere ka ndị ọzọ buru ihe oriri laa. Ma ọ sịrị ha: ‘Mgbe unu ga-abịa ọzọ, unu hụ na unu kpọ nwanne unu ahụ nke kasị nta bịa.’
Mgbe ha laruru Kenan, ụmụnne Josef gwara nna ha bụ́ Jekọb ihe niile merenụ. O wutere Jekọb nke ukwuu. O wee na-ekwu ákwá ákwá, sị: ‘Josef anọkwaghị, ma ugbu a Simiọn anọkwaghị ya. M gaghị ekwe ka unu duru Benjamin nwa m nke kasị nta.’ Ma mgbe ihe oriri ha malitere ịgwụ, Jekọb kwere ka ha kpọrọ Benjamin gaa Ijipt iji nweta ihe oriri ọzọ.
Josef hụrụ ụmụnne ya ka ha na-abịa. Obi tọrọ ya ụtọ ịhụ Benjamin nwanne ya nke nta. Ọ dịghị onye n’ime ha matara na oké mmadụ ahụ bụ Josef. Josef mere otu ihe mgbe ahụ iji lee ụmụnne ya iri ahụ ule.
Ọ gwara ndị ohu ya ka ha tinyejuo ihe oriri n’akpa ha. N’emeghị ka ha mara, o mere ka e tinye iko ọlaọcha ya pụrụ iche n’ime akpa Benjamin. Mgbe ha hapụrụ wee jeruo ebe dịtụ anya, Josef zipụrụ ndị ohu ya ịchụ ha. Mgbe ha chụkwutere ha, ndị ohu ahụ sịrị: ‘Gịnị mere unu ji zuru iko ọlaọcha nke onyenwe anyị?’
Ụmụnne ya sịrị: ‘Anyị ezughị iko ya. Ọ bụrụ na unu achọta ya n’aka onye ọ bụla n’ime anyị, ka e gbuo onye ahụ.’
N’ihi ya, ndị ohu ahụ lere akpa ha niile, wee chọta iko ahụ n’ime akpa Benjamin, dị ka ị na-ahụ n’ebe a. Ndị ohu ahụ wee sị ha: ‘Ndị ọzọ niile pụrụ ịla, ma Benjamin ga-eso anyị laghachi.’ Gịnị ka ụmụnne iri ndị ọzọ ga-eme ugbu a?
Ha niile sooro Benjamin laghachi n’ụlọ Josef. Josef gwara ụmụnne ya, sị: ‘Unu niile pụrụ ịla, ma Benjamin ga-anọrịrị n’ebe a dị ka ohu m.’
Juda wee kwuo okwu, sị: ‘Ọ bụrụ na m laa hapụ nwa okoro a, nna m ga-anwụ n’ihi na ọ hụrụ ya n’anya hie nne. Biko debe m n’ebe a dị ka ohu gị ma kwe ka nwa okoro a laa.’
Josef hụrụ na ụmụnne ya agbanwewo. Ha abụghị ndị obi tara mmiri na ndị obi ọjọọ ọzọ. Ka anyị chọpụta ihe Josef meziri.
Jenesis 42:9-38; 43:1-34; 44:1-34.
N’ihi gịnị ka Josef ji boo ụmụnne ya ebubo na ha bụ ndị nledo?
N’ihi gịnị ka Jekọb ji kwere ka nwa ya nke ikpeazụ, bụ́ Benjamin, gaa Ijipt?
Olee otú iko ọlaọcha Josef si banye n’akpa Benjamin?
Gịnị ka Juda kwere nkwa ime ka e wee tọhapụ Benjamin?
Olee otú o si bụrụ na ụmụnne Josef agbanweela?
Gụọ Jenesis 42:9-38.
Olee otú ihe Josef kwuru na Jenesis 42:18 si bụrụ ezi ihe ncheta nye ndị nwere ibu ọrụ ná nzukọ Jehova taa? (Nehe. 5:15; 2 Kọr. 7:1, 2)
Gụọ Jenesis 43:1-34.
Ọ bụ ezie na Ruben bụ nwa mbụ, olee otú o si bụrụ Juda kwuchitere ọnụ ụmụnne ya? (Jen. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Ihe 5:2)
Olee otú Josef si lee nnọọ ụmụnne ya ule, n’ihi gịnịkwa? (Jen. 43:33, 34)
Gụọ Jenesis 44:1-34.
Dị ka otu n’ime ụzọ isi mee ka ụmụnne ya ghara ịmata onye ọ bụ, gịnị ka Josef kwuru banyere onwe ya? (Jen. 44:5, 15; Lev. 19:26)
Olee otú ụmụnne Josef si gosi na ha enweghịzi anyaụfụ ha nweburu n’ebe nwanne ha nwoke nọ? (Jen. 44:13, 33, 34)